Maraykanka oo diiday xoojinta xakamaynta hubka laga iibiyo shacbiga. - Wargeyska Faafiye
Maraykanka oo diiday xoojinta xakamaynta hubka laga iibiyo shacbiga.
Aqalka sare ee baarlammaanka dalka Maraykanka ayaa diiday qorshe la doonayay in lagu xoojiyo xakamaynta hubka.Qorshaha la diiday ayaa dhigaya, in aan hub laga iibin qof kasta oo lagu tuhmay inuu xiriir la leeyahay argagixisada.
Intii ka dambeysey weerarkii ay ku dhinteen 49-ka qof ee dhawaan ka dhacay gobolka Florida, ayaa qalka Senate-ka waxaa loo gudbiyay ilaa afar qorshe oo ku saabsan arrimaha hubka ee shacabka Maraykanka.
Xisbiyada siyaasadeed ee dalkaas ayaa ku kala aragti duwan, qaabka loo maaraynayo hubka laga iibinayo dadka shacabka ah.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsEx-Xildhibaan Saalax badbaado oo la sheegay in uu ahaa ninkii fuliyey qaraxii agagaarka garoonka diyaaradaha.Save the Children gaari u rarnaa oo la dhacay.the Mexican Narco-State 43 student missingTurkiga oo ka caawinaya Soomaaliya dhismaha xeryaha ciidanka.London Somalia conference: 'Britain is playing catch up'